OpenIndiana yakasarudzika yemahara Unix imwe nzira yemaseva | Linux Vakapindwa muropa
OpenIndiana yakasarudzika yemahara Unix imwe nzira yemaseva
OpenIndiana ndeye Unix-senge inoshanda sisitimu yakaburitswa yemahara uye yakavhurwa sosi software. Iyo forogo yeOpenSolaris akaumbwa mushure mekutengwa kwaOracle kweSun Microsystems (kuvandudzwa kwayo kwakamiswa naOracle) uye inotarisira kuenderera mberi nekuvandudzwa kweOpenSolaris codebase.
Iyo purojekiti inoshanda pasi pekuchengetedza kweiyo Illumos Foundation, sezvo OpenIndiana ichipa mushandisi nzvimbo yekushandira zvichibva pachikamu chitsva chekodhi yekodhi yeiyo Illumos chirongwa. Kubudirira OpenSolaris matekinoroji ramba uine chirongwa cheIllumos, iyo inogadzira kernel, network stack, mafaera masystem, madhiraivha, pamwe neiyo yekutanga seti yezvishandiso nemaraibhurari eiyo mushandisi system.
Chinangwa chakataurwa cheprojekiti ndechekuve iyo de facto Kugovaniswa kweSolaris kunoiswa pamaseva ekugadzira uko kuchengetedzeka uye kugadzirisa bug kunodiwa mahara.
1 Nezve iyo nyowani vhezheni yeOpenIndiana 2019.10
2 Dhawunirodha OpenIndiana 2019.10
Nezve iyo nyowani vhezheni yeOpenIndiana 2019.10
Munguva pfupi yapfuura iyo nyowani vhezheni ye Indiana Open 2019.10, mune mukati meiyo main maficha anomira kunze mukushambadzira yeizvi, zvinowanikwa kuti lIyo IPS (Image Packaging System) package management management yakashandurwa kuita Python 3.
Iyo illumos kernel kuvaka yakachinjirwa kuGCC 7. Nekukanganisa, iyo cxgbe firmware uye Intel microcode yakagadziridzwa. Ipo kugadziriswa uye ZFS projekiti inosimudzira pane Linux yakaendeswa kune iyo ZFS kuitiswa, kusanganisira kugona kunyorera data uye metadata, uchishandisa UNMAP / TRIM yeSSD.
Panzvimbo peClang 4.0, Clang 8.0 yakawedzerwa. Makomputa akagadziridzwa GCC 7.4 uye 8.3, kusanganisira GCC 9.2. Zvishandiso zvekuvandudza zvakagadziridzwa zvakare: Git 2.23.0, CMake 3.15.1, Rust 1.32.0, Enda 1.13.
Pane chikamu cheseva software, zvinyorwa zvakawedzerwa: MongoDB 4.0, Nginx 1.16.1, Samba 4.11, Node.js 12.13.0, 10.17.0, 8.16.2, BIND 9.14, OpenLDAP 2.4.48, tor 0.4.1.6. Zvakare iyo shanduro dzakagadziridzwa dzevashandisi zvirongwakusanganisira VirtualBox 6.0.14, FreeType 2.10.1, GTK 3.24.12, LightDM 1.30, Vim 8.1.1721, Nano 4.5, Sudo 1.8.29. X264 encoder.
Wakawedzera mapakeji ne mpg123, x265 uye mpack. ZveBash, tmux, uye Vim, iyo Powerline mamiriro bar inokurudzirwa.
Wakawedzera x11-init sevhisi kugadzira madhairekitori anodikanwa ane rombo remidzi muchikamu chekutanga-kutanga kweX11 kunyorera.
Imwe shanduko inomira pachena ndeyekuti Hyper-Threading rutsigiro yakaremara nekutadza.
kunze kwaizvozvo basa rakaitwa pakudzivirirwa kubva mukukuvadzwa L1TF uye MDS (Microarchitectural Data Sampling). Iyo yakakosha yakaungana pamwe nekudzivirira retpoline.
Vakawanda kusimudzira kwakabatana nerutsigiro rweSMB 3 protocol kwaendeswa pamusoro penzara, kusanganisira rutsigiro rwekunyorera, kugona kushandisa mapaipi anonzi, rutsigiro rwe ACLs, hunhu hwemberi, uye kukiya faira.
Izvo zvikamu zvebhinari zveiyo DDU zvinoshandiswa, zvinopa ruzivo nezve zvishandiso kuti uwane madhiraivha akakodzera, zvinonyorwazve. Yakagadziridzwa dhatabhesi dhatabhesi. Kodhi yeDDU inotakurirwa kuPython 3.5.
Musimboti wekare SPARC chikuva yakatarwa kodhi yacheneswa.
Wakawedzera C.UTF-8 locale.
Iwo OmniOS CE Nyamavhuvhu Gadziriso magadzirirwo akaendeswa kune IPS.
Kuenderera mberi kwekutarisa kwakasarudzika OpenIndiana kunyorera kubva Python 2.7 kusvika Python 3.
Sangano reFreeBSD rakave rakashandisirwa kushandisa pluggable TCP kumisikidza kudzora vanobata. Wakawedzera rutsigiro rweCUBIC uye NewReno algorithms.
Zvekunyorwa kwepassword nyowani, iyo SHA512 algorithm inoshandiswa nekutadza;
Crontab akawedzera rutsigiro rwe "/ NUM" fomati, semuenzaniso, "* / 2 * * * *" kumhanya maminetsi maviri ega ega.
Yakagadziridzwa bhuti rutsigiro pane UEFI masisitimu.
Dhawunirodha OpenIndiana 2019.10
Kubva pane iyi nyowani vhezheni yeOpenIndiana 2019.10, mhando nhatu dzemifananidzo yeIO dzakaumbwa, imwe yacho iri server server ine console application (723 Mb), imwe yacho iri diki yekuunganidza (431 Mb) uye imwe yacho kusangana pamwe nharaunda. graphic MATE (1.6 GB).
Kune avo vanofarira kurodha pasi uye kuyedza ino sisitimu, ivo vanogona kuwana iyo mifananidzo kubva ku inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » OpenIndiana yakasarudzika yemahara Unix imwe nzira yemaseva